"Fa ny fahorianay maivana, izay vetivety foana, dia mainka miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay."2 Korintiana 4:17
"Fa ataoko fa ny fahoriana amin’izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoharina amin’ny voninahitra izay haseho amintsika."Romana 8:18
«Salama tsara avokoa ireo olona manodidina ahy, fa izaho kosa tratran’aretina mikiky tsikelikely ny heriko, ary tsy ahitam-panafana. Nahoana no izaho no voan’izany, fa tsy ny hafa? Inona no nataoko, mahatonga ahy hijaly toy izao?» Miverimberina matetika ireo fanontaniana ireo… Toa miangatra ny fiainana. Ho an’ny sasany dia misosa tsy misy olana na fanahiana izany. Ho an’ny hafa, mivangongo ny zava-tsarotra.
Ny patriarka Joba, izay niharan’ny fitsapana tsy misy toy izany noho ny namoizany ny fananany sy ireo zanany ary ny fahasalamany, dia niteny hoe: “Enga anie ka holanjaina tokoa ny fahasosorako, ka ampifandanjaina amin’ny mizana izy sy ny fahoriako! Fa ankehitriny mavesatra noho ny fasika any an-dranomasina ny fahoriako, koa dia nirediredy aho” (Joba 6:2-3). Raha araka ny fiainantsika eto an-tany fotsiny no ijerentsika ny miseho, dia toa mahakivy tokoa ny zava-drehetra. Tia antsika anefa Andriamanitra, mahatsapa ny fahoriantsika, ary te hitarika antsika hijery any ambadik’izao hita maso izao. “Fa ny hita dia ho vetivety foana, fa ny tsy hita no haharitra mandrakizay” (2 Korintiana 4:18). Rehefa tarafin’ny fahazavan’Andriamanitra ny fijaliana, dia manjary misy dikany hafa. Izay ataon’ny tsy mino hoe tsy rariny, ho an’ny mpino izay matoky an’Andriamaniny kosa, dia fitsapana, hiova “ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana … amin’ny hisehoan’i Jesosy Kristy” (1 Petera 1:7). Mampahery izay rehetra mijaly ny apostoly Paoly, amin’ny alalan’ireo tenin’Andriamanitra nomena antsika androany. Tao amin’ireo fitsapana maro nihatra taminy, dia nanohana azy ny fahazoana antoka hoe tia azy Andriamanitra, ary koa ny fanantenana ny mandrakizay atokan’Andriamanitra ho an’ny mpino.